မဟာသံဝါသနေ့ ၊ ရိုက်စားကောက်ထည့်နှင့် သူကြီးသို့ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မဟာသံဝါသနေ့ ၊ ရိုက်စားကောက်ထည့်နှင့် သူကြီးသို့ပေးစာ
မဟာသံဝါသနေ့ ၊ ရိုက်စားကောက်ထည့်နှင့် သူကြီးသို့ပေးစာ
Posted by ခရီးသည်ကြီး on Feb 20, 2014 in Creative Writing | 32 comments
ကြုံသလိုရှာစားရတဲ့ဘဝအခြေအနေမှာ ရံဖန်ရံခါတက်စီ မောင်းတယ် ။
တောက မြို့ကို အပြန်ကုန်သယ်တယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့ 14 ရက်နေ့ကတော့ ညမောင်းဒရိုင်ဘာမလာတာနဲ့ ကျုပ်လဲ တက်စီလေးဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်နဲ့
ညကြေးလေးထွက်ရှာခဲ့ပါတယ် ။ ပထမဆုံးဈေးဦးပေါက်ငှားသူက
စုံတွဲ တစ်တွဲဗျ ။
သိနေတယ်လေ ။ ဒင်းတို့ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာ ……ဒါပေသိ ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး ငှါးတဲ့ဆီလိုက်ပို့ပေးရုံပေါ့ဗျာ ။
နှစ်မှတ်တိုင်ကျော်ကျော်လောက်က တည်းခိုခန်း စုတ်စုတ်တစ်ခုကို ၁၀၀၀ နဲ့ပို့ရတယ် ။
ရောက်တဲ့အခါမှာ ကောင်မလေးကိုကားပေါ်ခဏထားပြီး ကောင်လေးကအခန်းသွားမေးတယ် ။
မရှိတော့ပါဘူးတဲ့ ။ ဒါနဲ့ နောက်တည်းခိုခန်းတစ်ခုကို ဆက်တာပေါ့ ။
ပြည့် နေပါပြီတဲ့ ။ နောက်တစ်နေရာကိုဆက်ကြတာပေါ့ဗျာ ။
ကျုပ်လည်း မနေနိုင်တော့ လျှာရှည်မိတယ် ။ အခန်းခဘယ်လောက်လဲ…… ဘာလဲ ညာလဲ ပေါ့
တစ်ဂျူတီကို နှစ်သောင်းခွဲကနေ သုံးသောင်းဝန်းကျင်ပါ တဲ့ ။
ဘာတွေပါလည်းဆိုရင် ကုတင်နဲ့တဲ့တဲ့တစ်လုံး ၊ ပန်ကာအစုတ်တစ်လုံး ၊ နံစော်နေတဲ့ အိပ်ယာခင်းနဲ့ခေါင်းအုံးနှစ်လုံး ။
အော် … ခါတော်မှီ ဈေးကွက်စီးပွားရေးနှယ် ။ ဒီလောက်နဲ့ပြီးပလားဆိုရင် …… ကျန်သေးတယ် ဆက်ပြောဦးမယ် ။
ဒါနဲ့ ပြောဖို့ကျန်ခဲ့တာက ဒီစုံတွဲက ရိုးရိုးသမီးရီးစားတွေပါ ။
ပြည့်တန်ဆာ(ကြက်) မဟုတ်ပါဘူး ။ ကားပေါ်ပြည့်တန်ဆာတက်လာရင်ဘကျုပ်နှာခေါင်းကသိတယ် ။
အနံ့တစ်မျိုးထွက်လာလို့ပါ ။တစ်မျိုးမထင်ပါနဲဗျ ။
ရှေ့လျောက် ကြက် လို့ပဲ သုံးနှုံးချင်ပါတယ် ။ရိုင်းတယ်မယူဆကြပါနဲ့ဗျ ။ စာရေးရတာရှည်လို့ပါ ။
ပြောရင်းလည်သွားပြန်ပြီ …… အိုက်ဒီ ကျုပ်သိတဲ့ အနံ့ထွက်သောကြက်အမျိုးအစားတွေက လမ်းဘေးကြက်တွေပါ ။
ဖုန်းဆက်ပြီး ချိန်းရတဲ့ အထက်တန်းစားကြက်တွေမဟုတ်ပါဘူး ။
ဟိုကြက်တွေဆိုရင်တော့ ကျုပ်လည်း မသိနိုင်ဘူး ။
သူတို့က ဘော်ဒီ SPA တွေမှာ တစ်ပါတ်တစ်ခါ ဆာဗစ်ဆင်ဝင်ထားတာဆိုတော့ အထက်ကဆိုခဲ့င်္ပြးတဲ့
စိမ်းရွှေရွှေအနံ့ကြီးမထွက်လိုဘူး ။ ထားပါတော့… ကြက်သုတေသနဖြစ်နေရော့မယ် ။
ကျုပ်လည်း ဈေးဦးပေါက်သုံးထောင်ရပြီးတာနဲ့ ပါရမီလမ်းဖက်လှည့်လိုက်ပါတယ် ။
တဆက်တည်းပြောရရင် ကျုပ်တို့တက်စီသမားတွေဟာ ဘယ်သူငှားငှား တင်ရတာပါဘဲ။
ခင်ဗျား ကြက်လားလို့ မေးရင် ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ မိတ်ဆက်သွားလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့က အချို့သောအတွင်းရေးတွေပိုသိနေတတ်တာပါ ။
မကြာခင်မှာ ဘဲတစ်ပွေလှမ်းတားတယ် ။ ကားပေါ်ရောက်တော့ ပါရမီ လမ်းသစ်ကိုမောင်းပါတဲ့ ။
ကျုပ်သိလိုက်ပါပြီ ။ ဒင်းက ဗဟိုလမ်းနဲ့ဘုရင့်နောင်လမ်းကြားမှာ အမဲလိုက်မှာကိုးဗျ ။
ကျုပ်စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြုံးလိုက်တယ် (ခင်ဗျားကြီးဒီအချိန်မှ ဒီလိုရက်မျိုးသွားရှာရင် နောက်ကျနေပြီ လို့ )
ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကြက်တစ်ကောင် ကြောင်တစ်မီးမှမရှိတော့ဘူး။
နောက်တစ်နေရာကို ဆက်သွားခိုင်းတယ် ။ ပြည်လမ်း ခြောက်မိုင်ခွဲကနေ တံတားဖြူကြား ။
နောက်ကျသွားပြန်ပြီ ။ကျုပ်ကတော့ ကားခတွေထောပြီပေါ့ဗျာ ။
ကျုပ်ကို လမ်းဘေးမှာ ခဏရပ်ခိုင်းပြီး ဖုန်းဆက်တယ် ။
အဆင်ပြေပုံမရဘူး ။ ကျုပ်ကို ငြီးတွားပြီးပြောတယ်ဗျ
( ဈေးတွေပြောင်းတယ်ဗျာ တဲ့ ။ အော်ဒါတွေလည်းပြည့်ကုန်ပြီ တဲ့ )
ဟမ် !! ……… ကျုပ်ကြား ဖူးတာရွှေဈေးငွေဈေးတွေဘဲ ရာသီအလိုက်ပြောင်းတာဗျ ။ အခု …… ဒီကနေ့အဖို့
ကြက်ဈေးလည်း ပြောင်းတတ်တယ်ပေါ့ ။
ထိုဇွဲကြီးလှသော အမျိုးကောင်းသားက မင်္ဂလာဈေးဖက် ကိုဆက်မောင်းခိုင်းတယ် ။
ကျုပ်တော့ အုံနာကြေးကျေပြီပေါ့ဗျာ ။ သူက သေချာတဲ့ပွိုင့်ကိုရိုက်တာပဲဗျ ။
ကျုပ် လမ်းတလျောက် ကားမောင်းရင်း ဒီကနေ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်တွေးနေမိတယ် ။
ကျုပ်က အုံနာခ ပြည့်မှီရေး ၊ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်
ပြူးပြဲပြီးရှာဖွေရတယ် ။ သူတို့တွေက လည်း စိတ်အဆာပြေရေးအတွက် ရှာဖွေကြတယ် ။
အပူခြင်းပြိုင် ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုသလိုပဲဗျ။ဒင်းတို့က ဒီနေ့လေးမှ မကဲ ရရင် နောက်နေ့ကမ္ဘပျက်မတတ်။
ကျုပ်လည်း မင်္ဂလာဈေးဖက်ကအပြန်မှာ လန်းကြုံလို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ဆေးဆိုင်မှာ
ပြီးရင် လက်ဘက်ရည်လေးသောက်ပြီးခဏနားဦးမယ်လို့တွေးတာပေါ့ဗျာ ။
နှစ်နာရီနီးပါးရှာလိုက်တာ ညကြေးတော့ ကိုက်သွားပါပြီ ။
ဟိုအတွဲက သုံးထောင် ၊ဟိုဘဲက ရှစ်ထောင် ……
အုံနာကြေးနဲ့ဆီဖိုး ပြည့်ပြီဆိုတော့ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံ အိမ်အတွက်ပဲပေါ့ ။
ဆေးဆိုင်ရောက်တော့ မိတ်ဆွေနဲ့ လေပေးဖြောင့်ရင်း ထပ်ပြီးသိလိုက်ရတာက
ဆေးတွေ ဒီနေ့ ရောင်းကောင်းတယ် တဲ့ ဗျ ။
ဘာဆေးလဲ … အောက်လမ်းဆေးတွေပေါ့ဗျာ ။
ဟမ် ! မင်းရော ဈေးတင်ရောင်းတာဘဲလား လို့မေးတော့
(ဝယ်တဲ့သူက ပစ္စည်းရဖို့ပဲ တဲ့ ။ ဈေးက ကျသလောက်ရှင်း မပြောဘူးတဲ့ )
ကောင်းတယ် ……ကောင်းတယ် …… ကျုပ်ကားခ ရလှပြီထင်တာ တည်းခိုခန်းလဲဈေးတက် ၊
ကားခလည်းစိတ်ကြိုက်တောင်း၊ ဘာဆေးညာဆေးတွေလည်း ဈေးတက် ၊ နောက်ဆုံး
ကြက်ဈေးလည်း တက် ။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးတွေများ လိုက်မမှီချက်က လက်ကုန်ပဲ ။
သတ္တဝါတွေမှာ အိပ ၊်စား ၊ကာမ ဤသုံးဝ ဆိုသလို ကင်းလို့မရသော်လည်း အဆင့်အမြင့်ဆုံးလူတွေမှာ အထိမ်းအသိမ်းတွေရှိကြတာပေါ့ ။
ဟေး ……ဒီနေ့တော့ အပီကစ်မဟေ့ လို့ ကြွေးကြော်နေသယောင်ဖြစ်နေတယ် ။
ကျုပ်ကရော ဘာလဲမေးရင် … လူသားပဲပေါ့ ဗျ ။
လူလိုတော့ ကမြင်းတာပေါ့ ။်ဒီနေ့ကတော့ သူတို့အပူမီးတွေ ကျုပ်ကိုလာဟတ်လို့
ကျုပ်တို့ငယ်စဉ်က ဒီလိုနေ့မျိုး မကြားဖူးခဲ့ဘူး ။ ကြာဖူးတဲ့အချိန်မှာလည်း နားလည်ပေးပါတယ် ။
ဒါပေသိ တနှစ်ထက်တနှစ်ပိုဆိုးလာပြီး လူ့အခွင့်အရေးလိုလို ဘာလိုလိုတွေမြင်လာရတော့ ချဉ်မိပါတယ် ။
စီးပွားရေးသမားများက ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်မြှောက်ပေးကြတယ် ။
ကဲချင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် ရေအသင့် ကြာအသင့်ပေါ့ ။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေ ( 12 to 15 ) တွေလည်း
သူ့နည်းသူ့ဟန် ထကြွဖို့စိုင်းပြင်းလာကြတယ် ။
တည်းခိုခန်းကိုသွားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး ။ခေါင်းထဲမှာ ဘယ်မျောက်လောင်းကရိုက်သွင်းထားလဲမသိဘူး
အဲဒီနေ့မှာ ကဲ ခွင့်ရှိတယ်ဆိုလား fb ပေါ်မှာ ပြောနေသံကြားမိတယ်။
တစ်လင်တစ်မယား စံနစ်သာ ကိုက်ညီလို့ လစ်ဗင်းတူဂဲသား ကို
အားမပေးလိုဘူး ။ ခင်ဗျားတို့ကပြောမှာပေါ့ အမေရိကားမှာဘယ်လို ၊ သြဇီ မှာဟိုလို …
ခင်ဗျားတို့ သိဖို့က ဒါ အမေရိကားမဟုတ်ဘူး ။
မြန်မာဖြစ်တယ် ။ မြန်မာလို ရေသောကက်တယ် ။မြန်မာလို ထမင်းစားတယ် ။
လူပါးဝရင်တောင် မြန်မာလို လူပါးဝတယ် ။ လောကမှာ အမှန်တရားဆိုတာ
ကိုယ်တယောက်တည်း သိနေလို့မရဘူး ။ အများလက်ခံဖို့လည်းလိုတယ် ။
လစ်ဗင်းတူဂဲသား ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပြောနေပြောနေ လူအများလက်ခံနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ရင်
ဒီပို့စ်ကို မဟာသံဝါသနေ့ လို့ သရော်ပြီးခေါင်းစဉ်တပ်ထားတယ် ။
အဲ့ညက ကျုပ်တွေ့သမျှတွေအများစုက ထိုနေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုဖို့ လုံ့လထုတ်နေကြလို့ပဲ ။
ကျုပ်ကြုံခဲ့တာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့နှစ်ဖွဲ့ တင် မကဘူး ။
မလိုအပ်ဘဲရှည်နေလို့ မပြောတော့တာ ။ အဓိက ကျုပ်တွေးနေတာက ……
*ကျုပ်တို့ လူမှုဝန်းကျင် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာလဲ
*ကျုပ်တို့ မျိုးဆက်တွေရဲ့ ယုံကြည်လက်ခံမှုတွေ ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲ
*ကျုပ်တို့ မြင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့မိဘများကရော ဘယ်လိုနားလည်လက်ခံပေးတာလဲ
*ကျုပ်တို့ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေက လိင်ကိစ္စရှေ့တန်းတင်နေကြတာလား
*ကျုပ်တို့ဟာ ခေတ်မှီခြင်းဆိုတာတွေအတွက် အားလုံးကိုပုံတူကူးကြတော့မှာလား
ကျုပ်လည်း ညဏ်မမှီတာတွေတွေးတောရင်း ညကြေးလေးကိုက်တာနဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ် ။
ကျုပ်ပြန်ချိန်က ညလယ် ၁၂ နာရီ ။ ဒီအချိန်ဆို ကျုပ်အဖွားကြီးလည်း အိပ်နေရော့မယ် ။ကျုပ်သားကိုနှိုးပြီးတံခါးဖွင့်ခိုင်းရဦးမယ် ။
ကျုပ်တခါလာတိုင်း ဒီဆိုက်က ပိုပြီး ခြောက်ကပ်သွားတယ် ။
အရင်တုန်းကစည်းကားလှပါတယ်ဆိုတဲ့ရွာကြီးက ထိန်ပင်သင်းချိုင်းလောက်မှ မစည်ကားတော့ပါလား ။
ကျုပ်သတိထားမိသလောက်ကတော့ ဟိုအယ်ဒီတာ သူကြီးနဲ့ တော်တော်ဆိုင်တယ် ။
ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ထေရဝါဒမကောင်းဘူချည့်အပုတ်ချနေတော့
မကောင်းလှဘူးဗျ ။ သင်္ကန်းခြုံပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေသူများရှိသော်လည်း
ဒီလို သိမ်းကြုံးပြောနေတော့ကာ ကြားရမြင်ရတာ ဆိုးတယ် ။
ယခုကြားနေရတဲ့သတင်းတွေအရ မသင့်တာတွေရှိတာမငြင်းလိုဘူး ။ ပြောချင်သပဆိုရင် တိုက်ရိုက်နာမည်တပ်ပြီးပြောပေါ့ဗျာ။
အမှန်အကန် ကျင့်ကြံအားထုတ်နေသူတွေပါ နာမည်ပျက်တာပေါ့ ။ ဒါဟာလည်း ဒီရွာ ဒီနေရာ ကိုစိတ်ကုန်ခြင်း
အကြောင်းတခုပဲဗျ ။ ကျုပ်က ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာကို လုံးဝ အားမပေးဘူး ။
ဘုန်းကြီးအလုပ် ဘုန်းကြီးလုပ်စေချင်တယ် ။
ဆွမ်းလောင်းလှူတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေအတွက် ဘာမှ အထူးလုပ်ပေးစရာမလိုဘူး ။
ကောင်းစွာကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေမှာ အကျိုး များစေပြီးသား ။
လယ်ယာမြေကောင်းဆိုတာ ကျင့်ကြံအားထုတ် သူမှာသာဖြစ်စေလိမ့်မယ် ။
နောက်တစ်ခုက ကော်မန့်တွေမှာ အနီအစိမ်းဆိုတာတွေကို လူသစ်တွေနဲ့
ဒါဟာ အကျိုးမများရင် ဆက်မထားသင့်ဘူး ။
အက်ဒမင်များ မျက်စိမှိတ်မနေသင့်ဘူး ။
ငြင်းခုန်ခြင်းဆိုတာ လူတစ်ချို့သာလျှင် ခံစားမှုကင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်တယ် ။
ရင့်ကျက်မှု လိုနေသေးသူတွေအဖို့ ငြင်းပွဲတစ်ခုဟာ ရန်တိုက်ပေးသလိုပဲ ။
သူ့မျက်နှာ ကိုယ်မကြည့်ချင် ကိုယ့်မျက်နှာ သူမကြည့်ချင် နဲ့ နောက်ဆုံး ဒီဆိုက်က ထွက်သွားကြတယ် ။
ဆိုချင်တာက နေရာတိုင်း ငြင်းပွဲတွေဖန်တီးပေးတာဟာ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း၊ ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကို
လျော့ပါးစေတယ် ။ ( အချို့သူတွေအတွက်)
သူကြီး သတိထားသင့်တာတွေပါဗျ ။
ဒီနေရာကနေ နာမည်တပ်ပြီး ကျုပ်ဝေဖန်လို့ ဒီစာကို ဖျက်ချြင်ဖျက်နိုင်ပါတယ် ။
ကျုပ်ကိုလည်း ထုတ်ပယ်ပစ်နိုင်ပါတယ် ။
သူကြီးအနေနဲ့ ဆိုက်မှာထုတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းအရဘာသာရေးအပုတ်ချတာတွေ
ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျ ။ ကိုယ်ခင်တဲ့သူကိုမကောင်းပြောရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ။
ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာကို ပြောတာဖြစ်နေတော့ တယ်မကြိုက်ချင်ကြဘူး။
မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယန် ဖြစ်ဖြစ် သူ့သဘောသူရှိပါစေ ။
ယုံရင်လုပ် မယုံရင်မလုပ်နဲ့ အပုတ်ချတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့
လက်ရှိသူကြီးပြောနေတတ်တာတွေက ခွေးနှစ်ကောင်ကိုက်လည်း ထေရဝါဒ –
လူတွေ အကျင့်ပျက်လည်း ထေရဝါဒ
ထေရဝါဒ အသံကြားရင် ထွန့်ထွန့်လူးနေတယ် ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာမသိတယ် ဘေးကကြည့်နေရတာ တစ်ခြမ်းစောင်းနေပြီဗျ ။
ကောင်းတာလေးတွေလည်း ရှာကြံပြောဦးမှပေါ့ ။
သုတနဲ့ သတင်း တင်ပြသူတွေ
ဟာသ သရော်စာ ရေးသူတွေ
ပျေိာ်ပျော်ပါးပါး ရေးချင် ဖတ်ချင်သူတွေ
တဖြည်းဖြည်း ရှောင်နေကြပြီ ဗျ ။
တစ်ခု ပြောချင်တယ် ။ ဒီဆိုက်မှာ ဂိုဏ်းစောင့် ဂိုဏ်းထောက် အဖွဲ့တခု
ဖွဲ့စည်းပြီး ပြန်လည်စည်းရုံးပါ ။
ဖြေးဖြေးသက်သာ ထည့်သွင်းပါ ။
ပုဆိုးစွန်တောင်စွဲပြီး ထေရဝါဒမကောင်းဘူးဆိုပြီး ထထ မအော်ပါနဲ့ ။
လူသစ်ဝင်လာရင် သူ့စရိုက်အတိုင်း အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံပါ ။
တဖြည်းဖြည်းမှ ပုံသွင်းယူပါ ။
လူသစ်တွေကို ဂရုစိုက်ပါ ။
မန်ဘာတွေ ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုများကို အားတက်သရောပါဝင်ပါ (ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက်)
FB ပေါ်မှာ ပလူပျံအောင်ရှယ်ပေးနေကြတာကိုပြောတာ။
ဒီလို ဒဲ့ ပြောခြင်းအတွက် ကျုပ်ကို အရေးယူမယ်ဆိုရင်
ဒီစာကိုဖျက်ပစ်ပြီး ကျုပ်ကို မန်ဘာအဖြစ်က ချက်ခြင်း ထုတ်ပစ်ပါ ။
သူကြီးနဲ့ မန်ဘာအားလုံးကို လေးစားပါတယ် ။
သွေးထွက်အောင်မှန်ပါပေ့ ခရီးသည်ကြီးရယ်လို့ ပထမဦးဆုံးပြောပါရစေ…
အဲသည့် မဟာသံဝါသနေ့ကို စီးပွါးရေးသမားတွေ ပစ္စည်းရောင်းကောင်းဖို့…
အဆိုကျော်တွေ ဇီးသီးထုတ်ပြီးလုပ်စားကြဖို့ ဝိုင်းပြီး ကျော်ညာလိုက်ကြတာ…
အရွယ်မရောက်သေးသူတွေလည်း ခြုံကြား ချောင်ကွယ်ရောက်…
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေလည်း တည်းခိုခန်းမှာ အလုပ်တွေကိုဖြစ်လို့…
ငါ့သားဘယ်အချိန် ငွေညှစ်ခံရမယ်လို့ စိုးထိတ်နေရတာ ကျောက်စ် ကိုယ်တွေ့…
အဲ… ဘာသာရေးကတော့ သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ့ဗျာ…
“ကျားကျား မီးယပ်” ကိုယ် သဘောမတွေ့တိုင်း လိုက်ဖဲ့နေရင် မဟုတ်သေးဘူး…
အင်း… ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းပုံ သိလျက်နဲ့ “ဟပေး ဖွယူ” ဆိုရင်တော့…
ရုပ်သံတွေကမနားတန်းပြနေတဲ့ ကိုးရီးရား ကားစံနက်လည်းပါတယ်.လူငယ်တွေကို နိုင်ငံရေးဖက်စိတ်မ၀င်စားအောင်လုပ်ထားတာ..
စာမဖတ်ကြတော့လို့ပေါ့ဗျာ…ဖွဘုတ်ပေါ်မှာပဲ ပေါက်ကရတွေ ရှယ်ပြီး အချိန်ကုန်နေကြတာ
မိဘအများစုကတော့ မသိရှာကြဘူးနဲ့တူပါရဲ့…( ကြက် ကိုမဆိုလို)
ဟုတ်တယ်လို့ပြောရမလိုပါပဲ…လိင်ကိစ္စနိုးထဖို့က အင်တာနက်က စတာပဲ…ဖုန်းမှာဆို ဆက်စ်ဗွီဒီယို
တွေက အိုးပင်းကြီး…မကြည့်ချင်အဆုံး…ကျုပ်သား(၇တန်း)စတစ်ထဲတောင် မဟုတ်တာတွေ့လို့
မှိုင်းတကာ့ မှိုင်းထဲမှာ ဝါဒမှိုင်းက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲဗျို့ :harr:
အရင် ဘရာဗို လို့ လာပြောတာ။
ခရီးသည်ကြီးရဲ့ စေတနာတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
မှန်လည်းမှန် အကျိုးလည်းရှိတာမို့ ပြောသင့် ရေးသင့်တာတွေဖြစ်လို့ ခရီးသည်ကြီးကို အားပေးထောက်ခံပါကြောင်းးးးးးးးးးး
ခရီးသည်ကြီး ၏ သဘောထားများပေါ့နော်
အတော်များများတော့ ခရီးသည်ကြီးနဲ့ တစ်သဘောထဲပါပဲ။
ခပ် ထက်ထက်လေး ရေးထားပုံကို ခိုက်သွားတယ်။
သွေးပြီးကာစ ဓါးတစ်ချောင်းနဲ့တူသော ပိုစ့် လို့ ညွှန်းရမယ်။
ရွာ့ အရေးလည်း ကောင်းစေလိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဝေဖန်ဆွေးနွေးပေးထားတာမို့ ဖတ် ရတာ အကျိုးရှိပါတယ် ။
ကျုပ်ကတော့ အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေကို အများအားဖြင့် စိတ်မ၀င်စားပါဘူး….
အဲဒီအထိမ်းအမှတ်နေ့တွေထဲမှာမှ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးလို့ခေါ်တဲ့ နေ့ကို ဒုတိယ သောက်မြင်အကပ်ဆုံးပဲ…
ိချစ်သူတွေရဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့အစစ်က ချစ်သူ စဖြစ်တဲ့နေ့ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်…။
ချစ်သူကို တည်းခိုခန်းခေါ်တဲ့နေ့ မဖြစ်သင့်ဘူး…။
ဒဲ့ …. ပဲ..။
လိင်လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့…
၁၈ နှစ် မပြည့်ခင် ဆိုရင် အဲဒါ ရာဇ၀တ်မှု့ပါ … လွတ်လပ်ခွင့်မဟုတ်ပါ….
၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးမှ ဆိုရင် အဲဒါ (ဒီနိုင်ငံမှာ) အဆင်ခြင်ကင်းမဲ့မှု့ပါ….
အဲဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကို သုံးချင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးမွေးတဲ့ မွေးစာရင်းမှာ
ဖခင်နေရာကို မရှိ/မသိ/ကွက်လပ် ထားလို့ ရတဲ့နေ့ကို စောင့်ကြပါ…။
ကိုယ်အသုံးမကျ ကိုယ်စိတ်အလိုလိုက်မိလို့ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ဒုက္ခခံမယ် မထင်ပါနဲ့
ဒီနိုင်ငံဟာ အမေရိကား မဟုတ်ပါ
ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူရတဲ့ ကိုယ်ယူနိုင်တဲ့ နိုင်ငံမျိုးမဟုတ် (သေး) ပါ…
ကိုယ့် တာဝန် ကို မိဘ မောင်ဖွား အဆွေအမျိုးများမှစလို့ မိမိ မျိုးဆက်များအထိ ယူကြရတာပါ…။
ကျုပ်တို့ဆီမှာ က အဲဒီ ကိစ္စကို ဖုံးဖိလာကြလို့လားမသိ။ အဲဒီကိစ္စတွေမှာ ဖြစ်လိုက်ရင် ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းးး
ပိုက်ဆံရလို့ လုပ်စားနေသူကိုလည်း မပြောချင်ဘူးးး
အဲ! ပိုက်ဆံပေးပြီး ပျော်ချင်တဲ့ သူကိုလည်း အပြစ်မတင်ဘူးးး
ဒါပေမဲ့ ဒီ ကိစ္စကို ဒီ ခေတ်ကြီးမှာ မထူးဆန်းပါဘူးဆိုပြီး မြှောက်ပေးနေကြတဲ့ အနုပညာ သမားအမည်ခံတွေတော့ နည်းနည်း ချဉ်သားကလားးး
မယူခင် အတူနေတဲ့ ကိစ္စကိုကျ ကလေးမလေးတွေ ပြောချင်တာက……..
ကိုယ့်နိုင်ငံက အမျိုးသားများအကြောင်းလည်းသိသင့်တာပေါ့ နော့။
လက်ကိုင်ရတာက အစ အခွင့်အရေးလို့ ယူဆတတ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ အသားယူချင်စိတ်က အနည်းအများ ကွာပါတယ်။
ယောင်္ကျားမိန်းမ မခွဲခြားဖူးဆိုတာ တူတူပဲ အခွင့်အရေးပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ဆီမှာမရှိဘူးရယ်။ လျှောက်ပြောတာ။
အရှက်ကွဲရင်တော့ ဗမာနည်းပဲ။ ပြေးမှာရယ်။
စိတ်ဓာတ်က မလိုက်နိုင်ပဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ မလိုက်ပါနဲ့။
အ ဟီ ဟိ ။ ငဒို့ သူဂျီး ကို ဝေဖန်နေကြပါလား ။ ဟီ ဟိ ။
ကောင်းလေစွ ။ ကောင်းလေစွ ။ ကောင်းလေစွ တကား ။
ခရီးသည်ကြီး ရဲ့ ။
သူဂျီး ဘာရည်ရွယ်ချက် နှင့် ဒီ Site ကို တည်ထောင်ခဲ့မှန်းတော့ ၊
ကျနော်လည်း သေချာ မသိရိုး အမှန်ပါ ။
အင်းးးး ၊ ကျနော့် အမြင် / အထင် လေးတွေကို ရမ်း ပြော / ရမ်း ရွှီး ရရင်ဖြင့် ။
ဒီ site ထဲမှာ သူဂျီး ရေးခဲ့တာ / မန့်ခဲ့တာ တွေမှာ ၊
ပက်ပက် စက်စက်ကြီး မှားနေတာတွေတော့ ၊ မပါရှာပါဘူး ( အထင် ) ။
ခက်နေတာက ၊ အတွေးအမြင် အဆင့်တွေက ကွာခြားနေကြသကွဲ့ ။
မှန်တာ တစ်ခု ပြောပြမယ်နော် ၊ စိတ် မဆိုးကြနှင့် ။
ပထမ အဆင့်အနေနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာဘဲ နေထိုင် ပညာသင်ခဲ့တဲ့သူ နှင့် ၊
နိုင်ငံရပ်ခြားအထိ သွားလာ ပညာသင်ယူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ ကြားမှာ ၊
အဆင့် တစ်ဆင့် / Barrier တစ်ခု ကွာခြားနေတယ် ကွယ့် ။
နိုင်ငံရပ်ခြားအထိ သွားလာ ပညာသင်ယူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ အချင်းချင်း တောင်မှ ၊
ယိုဒယား ၊ မလေးရှား ၊ စင်္ကာပူ တို့လို ဒီမိုကရေစီ မစစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ နေသူတွေ နှင့် ၊
အမေရိက ၊ သြဇီ အစရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစစ် နိုင်ငံတွေမှာ ၊
ခေတ္တ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ရှည် ပညာသင်ယူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ကြားမှာလဲ ၊
နောက်ထပ် အဆင့် တစ်ဆင့် / Barrier တစ်ခု ကွာခြားနေသေးတယ် ကွယ့် ။
အဲဒီ Barrier လေးတွေဟာ တော်တော် ပါးလွှာပြီး ၊ သေချာကြည့်မှ မြင်နိုင်ပါတယ် ။
တစ်ချို့ကတော့ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်လို့ ပညာဥာဏ် နှင့်တင် မှန်းကြည့်နိုင်ပေမယ့် ၊
ကျနော်တို့လို ငတုံးတွေကတော့ ၊
အဲဒီ အဆင့် ၃ ဆင့်စလုံး ကို ကိုယ်တိုင် ရောက်ရှိခဲ့လို့ ၊
( ပညာတော် ၊ ဥာဏ်ကောင်းလို့ သိမြင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးနော် )
( အဓိက က သူ့နိုင်ငံမှာ ရေရှည် နေရင်း နေရင်း နှင့် ၊ တဖြေးဖြေး နှင့် )
သြော် တရားမျှတမှု အစစ်အမှန် ( တရားမျှတမှု အစစ်အမှန် ) ဆိုတာ ၊
ဒီဟာ ပါလား ဆိုပြီး ၊ ခံစားသိ ( ခံစားသိ ) နှင့် သိလာတာဗျ ။
အဲဒီ အပြင် ၊ သူတို့တွေ ဟာ ( အဓိက အားဖြင့် လူဖြူတွေပေါ့ဗျာ ) ၊
ဒီလို တိုးတက် သာယာ ဝပြောတဲ့ နိုင်ငံကြီး ကို ၊
၁ ။ ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေ နှင့် အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ် ၊
( ဥပမာ ပြရရင် အဘော်ရီးဂျင်း တွေသာ တည်ထောင်မယ် ဆိုရင် ၊
အခုလို သာယာ ဝပြောတဲ့ သြဇီ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဗျ ။
ကျနော် ၁၀၀ % သေချာ / ယုံကြည်တယ် )
၂ ။ အဲဒီ နည်းလမ်းတွေကို မရခင်မှာ ဘာ အမှားတွေကို လုပ်ခဲ့မိတယ် ၊
( ဥပမာ ပြရရင် ကျနော့် အမြင်မှာတော့ ၉၆၉ / မဘသ တွေ ထကြွလာတာဟာ ၊
ဂျာမဏီ မှာ နာဇီ မတိုင်ခင် အမျိုးသားရေး ထကြွလာတဲ့ အဆင့်မျိုး အနုစား လို့ မြင်မိတယ် ၊
သမိုင်းမှာ မှားပြီးသား အမှားကြီးကို သင်္ခန်းစာ မယူနိုင်ဘဲ ၊ ထပ်မှားဖို့ ကြံနေသလို ဘဲ )
အဲဒါတွေကို သိမြင် လာခဲ့တယ်ဗျ ။
အဲဒီ အသိအမြင်လေးတွေကို ၊
အမိနိုင်ငံသားတွေကို စေတနာ နှင့် ဝေငှ မိတာ ဖြစ်မယ်ဗျ ။
ခက်တာက ၊ မြန်မာပြည် က ပြည်သူ အများစုကြီး ရဲ့ အမြင် နှင့် ၊
သူဂျီး ရဲ့ အမြင် က ၊ အပေါ်မှာ ရေးခဲ့ သလိုဘဲ ၊ အဆင့် Barrier ခြင်းက ၊
တော်တော်လေး ကွာနေတဲ့ အခါမှာ ၊ လူ လက်ခံ / လူကြိုက် နည်းတာ များတာတွေ ၊
စကားပြောလာ / ဖြစ်လာတယ် ထင်တာဘဲ ။
သို့ပေမယ့် ၊ ကျနော့် အမြင်မှာတော့ ၊
သူဂျီး ရဲ့ လုပ်ရပ် / အပြောအဆို တွေက အကျိုးမဲ့တော့ မဖြစ်ဘူး ဗျ ။
နာမည် နှင့်တကွ တပ်ပြီး မပြောလိုပေမယ့် ၊
ဖတ်ရင်း ငြင်းရင်း နှင့်ဘဲ ၊ တစ်ချို့ ရွာသူား တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ၊
မသိမသာကော သိသိသာသာပါ ပြောင်းလဲ လိုက်ပါ လာတာ တွေ့ရပါတယ် ။
အဲ့ အပြင် ၊ ဝင် မမန့် ၊ ဝင် မရေးပေမယ် ၊
အမြဲ / သတိထား ဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူတွေ ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကိုပါ ၊
ရိုက်ခတ် ပြောင်းလဲမှု ရှိစေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရတယ်ဗျ ။
( သူဂျီး အပြောအရဆိုရင် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေ ကပါ စောင့်ဖတ်နေ ဆိုဘဲ ၊ ဟီ ဟိ )
အဲဒီတော့ကာ ၊ သူဂျီး ရည်ရွယ်ချက် က ၊
တစ်ပိုင်း တစ်စ တော့ ၊ အောင်မြင်နေပုံဘဲ ဗျ ။
( အထင် ၊ အထင် ၊ ဟီ ဟိ )
ဒီလို v-day နေ့လို အကျည်းတန်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှာ (အရွယ်
ရောက်ရောက် မရောက်ရောက်) တရားမဝင် လိင်ကိစ္စတွေပြုလုပ်
လာကြခြင်းသည် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူများက 80% တာဝန်ရှိတယ်
ဒီလိုတာဝန်မဲ့လာတဲ့အရေအတွက်များလာလို့ တည်ခိုခန်းတွေဟိုတယ်တွေ အခွင့်ကောင်းယူစီးပွားရှာလာခွင့်ရသလို (တဖက်ကကြည့်ရင် ဘုရားကြိုကျောင်းပျက် ပန်းခြံအဆုံး ခြုံပုတ်တွေ မှာထက်စာရင် ………………)ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကလည်းနေရာ ရလာတာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီကိစ္စတွေမှာ မိဘတွေ အုပ်ထိန်းသူတွေကအစ လင်ကွဲမယားကွဲ နောက်မီးလင်း မယားပြိုင် တွေနဲ့ လမ်းပြနေတာတွေကလည်းပါနေသေးတော့ ……………………။
လူကြီးတွေ ၁၀၀၀ ဖိုးလောက်ကောင်းပြမှ လူငယ်တွေ ၁၀၀ ဖိုးလောက်ယူကြမှာကိုးးးး။
မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေ မိမိသားသမီးတွေကို သူငယ်တန်းကစလို့ အိမ်ထောင်ကျသည်ထိ ကြည့်နိုင် ထိန်းနိုင်မှနော်။ ငွေကလည်းအရာရာကို ဝယ်နိုင်တယ်ခင်ဗျ။ငွေကိုချင့်ချိန်ကြပါ။ သားသမီးကို ငွေနဲ့ မထိန်းကြပါနဲ့စို့။
ဒီရွာနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ကတော့ ကိုယ်ဟာကိုယ်ထိန်းဖို့လည်းလိုတယ်။
တခါ ဒီရွာထဲကလူတွေအကုန်လုံးဟာ အခြားဘယ်မှာမှ မရှိနိုင်တဲ့
ဆရာ စစ် တွေချည်းပဲလို့လဲမြင်နိုင်တယ်။
ဒီရွာထဲကိုရောက်စကလူတွေဟာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အပြင်က
စိတ်ခံစားမူ့တွေကို ခွတ်ပစ်ပြီး စိတ်ထားအသစ်နဲ့ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွာသူားအသွင်နေနိုင်တယ်။
” ကျုပ်တို့ဟာ ခေတ်မှီခြင်းဆိုတာတွေအတွက် ”
ကျနော်ကတော့ အဲဒါ ( Valentine Day သံဝါသ ) ကို ၊
ခေတ်မှီ တာ လို့ မပြောလို လက်မခံလို ပါဘူး ။
( နို့ ၊ ခေတ်မှီ တာနှင့် ဘာမှ မှ မဆိုင်လှဘဲဟာ )
လွတ်လပ် လာတယ် ၊ ပွင့်လင်းလာတယ် လို့ ယူဆမိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဒီ Valentine Day သံဝါသ ကိစ္စ ကြီးကော ၊ Living Together ကိစ္စ ကြီးပါ ၊
အခြေအနေက တောင်းဆိုလို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Process ကြီးလို့ မြင်ပါတယ် ။
၁ ။ အဲဒီတော့ သွားတားမနေပါနှင့် ၊ တားလို့လဲ မရနိုင်ပါဘူး ။
၂ ။ ပါတ်ဝန်းကျင်ကလည်း တဖြေးဖြေး လက်ခံသွားမှာပါ ၊ စိတ်မပူကြပါနှင့် ။
. ခေတ်ကြီးက တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာ
. ပြောင်းလည်းတာကိုက မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောနဲ့ဆို ကွက်တိဘဲ
. ကိုယ်မကြိုက်တာကတော့ ကိုယ့်အခွင့်ရေးဖြစ်သလို
. သူတို့ကြိုက်တာလည်း သူတို့အခွင့်ရေးဘဲပြောရမလားမသိ
. အကောင်းဖက်ကတွေးရင် သူတို့ကြိုက်လို့ သူတို့လုပ်ကြတဲ့အတွက်
. ပိုစ့်ပါအကြောင်းအရာတွေမှာ အချို့အကြောင်းရာတွေက
. အနီရောင်စာလုံးများနဲ့ ငြိနေတယ်လို့ ထင်ပါကြောင်း
တဂျီးက ဒီလို (လို့ ထင်တာပဲ)
ဟိုဘက်အစွန်းရောက်နေတဲ့သူတွေ ပြုတ်ကျမသွားအောင် သူက ဒီ ဘက် အစွန်းနင်းခေါ်ရင်း နင်းခေါ်ရင်းးး
သူလည်း ဒီ ဘက် အစွန်းရောက်သမား ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတာ (နေမှာပဲ)
ဟိုဘက် တို့ ဒီဘက်တို့က ဘာတွေတုန်းလို့တော့ လာမမေးကြေးနော်။
လူခြောက်တဲ့ (အဲလေ) ရွာခြောက်တဲ့ ကိစ္စကတော့ မပြောတတ်ဘူးးး။
အမျိုးမျိုးသော သူ များက
အနော့ကြောင့် မလာချင်တဲ့ လူမျိုးရှိရင်တော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါ။
အနော် ရွာက ထွက်ပေးပါ့မယ် လို့ (တော့ မပြောဘူးးး)
ရွာခြေက်တာကတော့ ရေမရှိလို့ အဲအဲ ဘွာတေး ဘွားတေး
ကျုပ် ကိုယ်နှစ်ဆယ်လောက်ခွဲ ဝင်ပြီး နွဲ ပစ်မှာ :mrgrren:
နာ့ ပို့(စ) ကျ မလာတဲ့သူတွေ သူများပို့(စ) ကျသွားတယ်လို့မှတ်နေတာ။
ဟုတ်တယ်ဗျိုးးး ပိုစ်အကြွေးတင်တာက သူဂျီးပေးရမဲ့ပွိုင့်ဖိုးထက်တောင်များနေမလာပဲ။
ကော်နရှင်ကြောင့် မန့်ဖို့နေနေသာသာ ပိုစ်ှုတပုဒ်လုံးတေင်ဝင်မရတာအကြိမ်ကြိမ်။
V-Day မှာ အမှတ်တရ သံဝါသများကတော့ Living together ကို တလွဲမြင်ခြင်းက ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. ရည်းစားဖြစ်မှတော့ တူတူနေတာ မဆန်းဘူးလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်.. အဲ..နေမယ့်နေ.. ဒီနေ့မှာ အမှတ်တရ နေကြမယ်ပေါ့…
တူတူနေတာ..Living together ကို မြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပြန်ရင် တူတူနေတာ ပေါ့.. ဒါပေမယ့် (အနော့် ယူဆချက် အရ) သဘောတရားခြင်း ကွာခြားပါတယ်.. နိုင်ငံခြားက living together တွေက မင်္ဂလာပွဲမကျင်းပတာက လွဲလို့ မိသားစုတစ်ခု၊ ဘဝတစ်ခု ကို နှစ်ယောက်အတူ တည်ထောင်ပြီး နေကြတာပါ.. ဒီမှာ ကျင့်သုံးတဲ့ living together က ကိုယ့်မိဘနဲ့ အတူတူနေပြီး (အိမ်မှာတော့ ကလေးမသာရုပ်လုပ်ပြီး) အပြင်မှာ ရည်းစားနဲ့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာ..
Conservative လို့ဆိုဆို အနော်ကတော့ အဲဒီလို ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာကို လုံးဝ လက်မခံပါဘူး.. ပြောကြတယ်.. ၂ ဦးသဘောတူလို့ ဖြစ်တယ်ပေါ့.. မိန်းကလေးမှာ ငြင်းပိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိတယ်ပေါ့.. ကျွန်မ စဉ်းစားကြည့်တယ်.. မိန်းကလေးတွေ ဘာလို့ မငြင်းကြတာလဲလို့.. ချစ်ကောင်းသီချင်းနဲ့ ပြောရရင် ချစ်လွန်းလို့ ဖြစ်သွားတာပါ လို့ပဲ ဆိုရမလားမသိဘူး.. ချစ်တော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို အလိုလိုက်ကြတယ်.. ဘာလို့ အလိုလိုက်တာလဲ..
ကိုယ့်ကိုပဲ တကယ်ချစ်ပြီး တကယ်လက်ထပ်မယ်လို့ ယုံလို့.. ကိုယ့်ကို ပစ်မသွားဘူးလို့ ယုံလို့..
(၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိတော့လို့
ဒီခေတ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အပျိုစင်ဘဝဆိုတာ အရေးမကြီးတော့ပါဘူးလို့ သတ်မှတ်ကုန်ကြတာ.. စစ်တာနဲ့ မစစ်တာ ဘာများ ကွာလို့လဲပေါ့.. အတော်များများကို မေးကြည့်.. ဒါမျိုးတွေက ရိုးနေပြီဆိုပြီး ကန့်ကွက်တဲ့ကိုယ်တွေကိုပဲ ဒိတ်အောက်သလို အပြောခံရတာ.. မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားစိတ် လျော့နည်းတာ ယောက်ျားလေးတွေကြောင့်လို့ ပြောရင် ဝိုင်းဆဲကြမလားမသိဘူး.. ကျွန်မကတော့ ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်တယ်.. ဒါလေးများ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုပြီး မှိုင်းသွင်းခံရတဲ့အောက်မှာ ခံယူချက်တွေ ပြောင်းကုန်တာ.. နောက် မီဒီယာကြောင့်လည်း အများကြီးပါတယ်..
တော်တော်ရှည်နေပြီထင်တယ်.. ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ် ခရီးသည်ကြီးရေ..
ိပို့စ်အတွက် ဘရာဗို ပါ..
လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းအရသာကို.. ဒီရွာသူားတွေ.. မြန်မာပြည်စစ်အစိုးရလက်ထက်.. အင်တာနက်ဆိုတာကြီး.. ပိတ်မိနေကတည်းက.. မြည်းစမ်းခဲ့ကြဖူးပြီ…
ပထမအကြိမ်ကွန်ဖရင့်မတိုင်ခင်ကတည်းက.. မျက်နှာတွေပြ.. အလှူတွေလုပ်… လုပ်ခဲ့ကြဖူးပြီ..။
မြန်မာပြည်အပြောင်းအလဲကြီးကြီးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတိုင်း.. ဒို့ရွာက..အဲ..အဲ..မြို့က.. အရေးကြီးတဲ့အခဏ်းကဏ္ဍတနေရာကပါပါနေပါတယ်..
မကြာခင်. .. ၂၀၁၅မှာ.. အပြောင်းအလဲမြင်ရမလား… မမြင်ရဘူးလား…
ဟိုတလောက စလုံးကို ဗမာ ရုပ်ရှင်ကား လာပြရော။
အဲဒီမှာ လာကြည့်သူတွေကို ကံစမ်းမဲ ဖောက်မယ်ပေါ့။
အဲဒီကားရိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုယ်တိုင် မဲနှိုက်တာပေါ့လေ။
မဲ မှာ ဘာတွေ ပါတုန်းဆိုတော့ ဟိုတယ် အခန်းတစ်ခန်း တည်းခိုခွင့်တို့ ဘာတို့ပါ ပါတယ်။
မဲမှာ ဒါမျိုး ပါ တာတော့ မဆန်းလှဘူးပေါ့လေ။
ဒါပေမဲ့ ဆန်းတာက မဲနှိုက်ပေးနေတုန်း ဒါရိုက်တာက ပြောတာ။
ခု နှိုက်မဲ့ မဲက ဟိုတယ် မှာ ၁ ည တည်းခိုခွင့်ပေါ့။
ရည်းစားအတွဲတွေ ပေါက်ရင် ကောင်းမယ်ပေါ့၊ ဝမ်းသာစရာပေါ့။
သူ က အဲလိုပြောတော့ ပို အံ့ဩသွားတယ်။
မီဒီယာမှာ ရုပ်ရှင်က ပျံ့နှံ့မှု များတဲ့ထဲ ပါပါတယ်။
အဲဒီလောက က လူတစ်ယောက်၊ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်က ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ စိတ်ထဲ ခိုးလို့ခုလု နဲ့။
နားလည်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားရတုန်း ဆိုတော့ ရန်ကုန်မှာ အတွဲတိုင်း ဒါမျိုးဖြစ်ကုန်လို့ မဆန်းပြားတော့လို့လားးးး
ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာ ဒီအပြောလောက်က ဟာသ သက်သက်ပဲလား စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။
မဲ တကယ်ပေါက်ခဲ့တာလည်း တကယ် အတွဲလေးပဲ။
ပြီတီတီပြုံးပြီး မဲ ဆုကိုပေးတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးကို နည်းနည်း ချဉ်သွားတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ ကိုယ်တိုင် လိမ္မာပြီး ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ အစားထဲ ကျုပ်မပါပါဘူးးး။
ကိုယ့် ဘဝ၊ အတ္တထက်တော့ ဘာကိုမှ ကျော်လွန်ပြီး မိုက်ခဲ့တဲ့သူ တော့ မဟုတ်ဘူးးး။
မိန်းကလေးတွေကို ဆိုးတာ လုပ်ချင်ရာလုပ်တာ ကိုတော့ ဘာမှ မပြောချင်ပေမဲ့
မိန်းကလေး တန်ဖိုးတစ်ခုက ဒါပါလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ လက်လွတ်စပယ်မဖြစ်စေချင်ဘူးလေနော့။
နောက်မှ သိလိုက်တာတော့ ကျုပ် အသက်ကြီးပြီတော့။ အဖွားကြီးဖြစ်ပြီ။
နာမည်ပြောင်းဦးမှပါ။ ဂျီးတော် ချွိ လို့။
စပ်မိစပ်ရာ ကွိစိကွစ …
ရေးချက်ဒွေကတော့ ဗဟုသုတရပါ့ ခရီးသည်ကြီးရေ …
ကိုယ့်အမြင် ကိုယ်အထင်ကို ရဲရဲတောက် ဝေဖန်တာကိုလည်း ကြိုက်ပါ့ ….
အင်း… ဂဇက်ရွာကြီး ပိုမိုစည်ကားသွားအောင်ဆို ပွိုင့်တွေပေးတာအပြင် ..
ဖွဘုတ်ပေ့ခ်ျတွေရို Like & Share Promotion တွေရို ဖုန်းတွေလက်ဆောင်ပေးတာတို့ .. ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးတာတို့ …ဘာညာသာလကာ လုပ်ပေးရင် ကောင်းမရားရို့ … ဟီးဟီး
(မဆီမဆိုင် အဆိုပြုသွားသည် သဂျီး ဖတ်မိပါစေတော်…)
ခရီးသည်ကြီး ရေးပြသွားတာက living together မှမဟုတ်တာ။ loving everywhere လို့ နာမည်တပ်ရမယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင် ကြုံ တိုင်းကမြင်း ပေါ့နော်။
အရိုးရှင်းဆုံး ဒဲ့ပြောရရင် living together ယဉ်ကျေးမှုကို ကျမ လက်သင့်ခံပါတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောစကားတောင်ရှိသေးတယ်။ အိမ်ထောင်မှု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုး၊ အီသုံးချက်မပိုင်လျှင်၊ နောင်ပြင်ရန်ခက်လိမ့်အမျိုး ဆိုလား။ လူတိုင်း ဘုရားမတည်ဘူး။ လူတိုင်း တက်တူးမထိုးဘူး။ သို့သော် လူများစု အိမ်ထောင်ပြုတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ချက်မှားရင် တစ်သက်စာပေးဆပ်ရတော့မယ်။ ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမို့လို့ အောင်မြင်တဲ့အိမ်ထောင်ကိုထူထောင်ရေးအတွက် ချစ်သူနှစ်ဦး နားလည်မှုရယူပြီး အစမ်းသဘော အိမ်ထောင်ပြုကြည့်တာကို living together ခေါ်တာလို့ သဘောပေါက်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သစ္စာရှိမရှိဆိုတာ ဘွင်းဘွင်းပေါ်တယ်။ အပေါ်က ပို့စ်ထဲကပုံစံနှင့် ဘာမှမဆိုင်ပါ။
ဘဖောရဲ့ barrier အကြောင်း ကွန်မင့်ကိုလည်း တအားသဘောကျမိတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှစ်ကြော် ဘယ်နိုင်ငံမှ မရောက်ဖူးဘဲနဲ့ လူများစုနဲ့ အမြင်ချင်းမတူဘူး။ အဲဒါ ဂွစာ မို့ပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ဂွဇွတ်ဂဇက်ကြီးထဲ ပျော်နေတာ။ (ခွက်ဒစ်တူ ဖြူ စိုင်းလူ)
နည်းနည်း ဝင် လေပေါရရင်. . .
လစ်ဗင်းတူဂဲသား ကို လက်ခံချင်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်။
အိမ်ထောင် တကယ်မပြုခင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အတူ အစမ်းသဘောမျိုးနေကြည့်တာ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်နေတယ်။
အတွင်းသိ အစင်းသိဖြစ်နေတော့ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ပိုကောင်းမလားလို့။
ချစ်သူရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေတော်တော်များများကို သိထားတော့ မကြိုက်တာရှိရင်လည်း ကြိုပြင်ဆင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါက ချစ်သူကို တည်းခိုခန်းခေါ်သွားပြီး
လိင် ကိစ္စတစ်ခုတည်းလေ့လာကြည့်ဖို့လို့ လုံးဝ မဆိုလိုပါဘူး။
ချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်ပဲ အစမ်းသဘောမျိုး လစ်ဗင်းတူဂဲသားတာဟာ
လိင် ကိစ္စတစ်ခုတည်းအတွက် ဦးတည်ချက်ထားရင် မှားမှာပေါ့နော်။
ဥပဓိပိုင်းဆိုင်ရာရော. . .
အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာရော အစစအရာရာ အနီးကပ် အတွင်းကျကျ လေ့လာ ခွင့်ရဖို့
ဒါပေမယ့် ပေါ့လေ. . . .
ရိုးရာ အစဉ်အလာတွေ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိစ္စ အသာ ထားပြီး
ဗမာယောကျာ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေရှည်ကို ကြည့်ပြီး …ခံစားမှု ….
အပိုင်းကျတော့. . . .
တကယ်လို့ ကျနော့်မှာသာ သမီးတစ်ယောက် ရှိနေပြီး ကိုယ့်သမီးကို အခြားလူငယ်တစ်ယောက်က
လာ လစ်ဗင်းတူဂဲသားရင်. . . .
အဲဒီ အချိန်မှာ ဖခင်တစ်ယောက်နေရာက ခံစားမှုက
လစ်ဗင်းတူဂဲသားကို လက်ခံနိုင်ပါ့ဦးမလားဆိုတာ တွေးမိတယ်။
အဲဒီ အပိုင်းကျတော့ ကိုယ်တိုင်က သမီးလည်း မရှိသေးတဲ့အပြင်
လစ်ဗင်းလည်း မတူဂဲသား ဖူးသေးတဲ့
လူပျိုနုနုထွေးထွေးဥဥဖွေးဖွေးလေးပဲ ရှိသေးတဲ့အရွယ်ဆိုတော့. . .
ဆက်တွေးဖို့ ဥာဏ်မမှီသေးဘူးရယ်. . .
ဒီတော့ ဒီကိစ္စကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ တစ်စခန်းရပ်ပြီး လူကြီးတွေ ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စ လို့ ယူဆ. . . .
ဆွေးနွေးချက်များကို ဆက်လက် စောင့်ဖတ်လေ့လာနေပါ့မယ် လို့။
နောက်တစ်ပိုင်း ရွာ့ အရေးကတော့ . . . .
ဒီပိုစ့်ကို ရွာထိပ်မှာ ချိတ်ပြီး ရွာသူားတွေ ပြောကြဆိုကြရင် ပိုကောင်းမလားပဲ။
comment မှာ အနီတွေ အစိမ်းတွေ လုပ်ကြတာကို တစ်ခုတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မိတယ်။ အဲဒါက. . .
ကိုယ် မန့်သွားတဲ့ ကိုယ့်အပေါ်က comment နီနေရင် . . .
အပေါ်က မန့်သွားသူက အောက်က မန့်လိုက်တဲ့ ကိုယ် နီပစ်လိုက်တယ် ထင်သွားမှာ စိုးတာ။
အမှန်က ဘယ်အချိန်က ဘယ်သူ့ လက်ချက်နဲ့နီမှန်းမသိပဲ. . .
ကိုယ်က မပြေးသော်ကံရာရှိကြီးဖြစ်နေမှာ စိုးတာပါ။ အဲဒါ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတယ်။
ကိုယ့် comment နီတာ စိမ်းတာလောက်တော့
ကျနော့်မှာ ခံစားချက် မရှိ ။
ရွာထဲ လူစည်ဖို့ဆိုတာ. . . . .
ခင်ဗျားကိုတော့ ကျုပ်မသိပါဘူး။ ခင်ဗျားက ပို့စ်တင်ပြီးရင် ကွန်မန့်တွေကို ပြန်မဆွေးနွေးတော့လည်း ပြောရတော့ ခက်သားပဲ။
ခင်ဗျား ပထမဆုံးပြောတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးကတော့ ဒီလိုဗျ။ တိန့်ရှောင်ဖိန် ပြောဖူးသလို တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ လေကောင်းလေသန့် ဝင်လာသလို ခြင်ကောင် ယင်ကောင်တွေလည်း ဝင်လာလိမ့်မယ် ဆိုသလိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် တခါတရံ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်က လူတွေက လေကောင်းလေသန့် ကျရင် မရှုပဲနဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ အညစ်အကြေးတွေ ပါတဲ့ လေတွေပဲ ရှုတာများတယ်ဗျ။ အဲဒါ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမျိုးသားရေး ကိုယ်ခံအင်အား နည်းရှာကြလို့ဗျ။ ဒါကို ပြောရင် အရှည်ကြီးပဲ။ အဲဒါကို ကန်ပိန်းနဲ့ လုပ်ပြန်ရင်လည်း ဦးဝီရသူလို အစွန်းတဖက်ကို ရောက်သွားဦးမှာပဲ။ နောင် တိုင်းပြည် တိုးတတ်လာလို့ နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီးမှုတွေ လုပ်သားအင်အားတွေ ဝင်လာရင် ဒီထက် ဆိုးတာတွေ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မြင်ယောင်မိတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်း ဆိုရမလိုပဲ။ ဒါဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဘာသာရေး ကြောင့်ပါဗျို့။ အဲလေ ယောင်လို့ ဒါက သဂျီးဇုတ်လေကို အတုခိုးကြည့်တာ။
နောက် လစ်ဗင်းတူဂဲသား ကိစ္စပြောရရင် စကားပြောရင် ရှေ့နောက် ကြည့်ပြောကြပါ ဆရာ ဆရာမ မဟာဥဏ်ကြီးရှင်တို့ရယ်။ တော်ကြာမှ ဟို မာမွတ်ခိုင်လို ရှေ့က ပြောတာနဲ့ နောက်က ပြောတာ တလွဲတွေ ဖြစ်ကုန်ပါဦးမယ်။ ပြောရင်လည်း ရိုင်းတယ် ထင်ကြဦးမယ်။ ကိုယ်မွေးထားတာက သမီးလေး နောက်ပြီး ကိုယ်ကလာပြီး လေ့လာလို့ရအောင် လစ်ဗင်းတူဂဲသား ကိစ္စကို ထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ နောင် ၁၅ နှစ်လောက် ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သမီးလေး အရွယ်ရောက်ရင် အဲဒီစကား ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာ သေချာသလားလည်း စဉ်းစားကြပါဦး။ အခု ကျမသမီးလေး ကျနော့်သမီးလေးက အရွယ်မရောက်သေးလို့ ဆိုပြီး စကားကို မစဉ်းစားပဲ မပြောကြပါနဲ့ဦး။
အဲဒီကျမှ ပြောနိုင်ရင် တခေါက်ပြန်လာပြောကြ ဟုတ်ပြီလား။ ကျုပ်မှာ သားနှစ်ယောက် မွေးထားလို့လေ။ ခင်ဗျားတို့ သဘောတူရင် သားရှင်တွေကတော့ နာမယ် မထင်ပါဘူး။ အမှန်တော့ အလင်းဆက်က ဒါကို ယာဉ်ယာဉ်လေးနဲ့ ဦးအောင် ပြောသွားလို့။ ကျနော်ထပ်ပြီး ပို့ပေးလိုက်တာ။
အဲဒါမျိုးကျတော့ ဘာလို့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ထောက်ခံဖို့ မပြောကြသလည်း မသိဘူး။ ရှေး မြန်မာလူကြီးတွေက အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုး ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ပြောသွားသလို ရှောင်ဖို့လည်း နှစ်ဖက်မိဘရော ကာယကံရှင်နှစ်ယောက်လုံးရော သုံးနှစ်သုံးမိုး အချိန်ယူ လေ့လာပြီးမှ လက်ထပ်ဖို့ ပြောသွားတာ။ လေ့လာဆိုတာ အခန်းထဲမှာ အတူနေပြီး လေ့လာခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ မိဘမျက်စိရှေ့မှာ လူကြီးလူကောင်း ပီပီသသ နေပြီး လေ့လာခိုင်းတာ။ အဲဒါရော စိတ်ချရလို့လား ဆိုရင် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် စိတ်ချရတာတော့ ဘယ်မှာမှ မရှိဘူး ကျေးဇူးရှင်တို့။
နောက်ပြီး ဆိုက်ထဲမှာ လူနည်းတာက ဒီပြင့် အကြောင်းတွေလည်း ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ အလုပ်မအားတာတို့ ကျောင်းစာမေးပွဲရှိလို့တို့ အိမ်ထောင်ကျသွားတော့ အရင်လို မဟုတ်တော့ပဲ အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေ များလာတာတို့လည်း ရှိမှာပေါ့။ နောက်တချက်က ခရီးသည်ကြီး ပြောတဲ့ သဂျီးဇုတ်ကိစ္စဗျ။ အမှန်တော့ ကျုပ်သိသလောက် အဲဒီလူက ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြောင်းမဲ့ ပုတ်ခတ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူပုတ်ခတ်လို့ လူနည်းသွားသလားဆိုတော့ ဒါကြောင့်ချည်းပဲတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တယ်။ အဓိကက သူက ခင်ဗျား ပြောသလို ဘက်စောင်းလို့ဗျ။ စောင်းတာမှ ခင်ဗျား ပြောသလို တခြမ်းကို ယိုင်နေတာပဲ။
ဒါပေမယ့် သူ့စကားတွေက အမြဲတမ်း ကြည့်လိုက်ရင် ရှေ့နဲ့နောက် တလွဲတွေချည်း ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အဲဒါတွေကို ဝေဖန်ရင်လည်း အမှန်တော့ သူမကြိုက်ဘူး။ ဒေါသထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်က စာထဲမှာတော့ ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါဘူးလို့ အမြဲရေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အမှန်တော့ သူနဲ့ ပလဲနံပသင့်တဲ့ လူတွေရဲ့ စာတွေကို တမျိုး မသင့်တဲ့လူတွေရဲ့ စာတွေကို တမျိုး သဘောထားတယ်။ ဘယ်လိုသိသလည်းဆိုရင်တော့ သိပ်သိတာပေါ့လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ အဲဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူတလွဲ ဖြစ်နေတာတွေကို ထောက်ပြမယ့်လူ မရှိတော့ပဲ သူ့ကို ဖားမယ့် လူတွေ များများလာတယ်။ သဂျီးလုပ်နေတာကို ပက်ပင်းကြီး တွေ့ပါရက်နဲ့ မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် တချို့လူတွေ စွန့်ခွာသွားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ။
ကဲဗျာ ကြာပါတယ်။ ခင်ဗျားကို လက်တွေ့ သူတလွဲ ပြောတာလေးတခု ထုတ်ပြမယ်။ ပို့စ်က သိပ်မကြာသေးဘူးဗျ။ သူကိုယ်တိုင် မိုးမခကနေ ကူးလာပြီး တင်တယ်ဆိုတဲ့ “ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ၏ သင်္ကန်းခြုံ သောနုတ္တိုရ်လက်သစ်များ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာပေါ့ဗျာ။ ဒီစာမျက်နှာ myanmargazette.net/193925 မှာပေါ့ဗျ။ အသေးစိတ်တော့ သွားသာ ဖတ်ကြည့်ပေတော့။ သူပြောတာက “မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တိုင်းပြည်တွေများ ချမ်းသာလာလိုက်ကြ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ် အေးချမ်းလိုက်ကြတာများ ကျိကျိတတ် တလောကတင် ယူအက်စ် ပါဆယ်ဒီနားရပ်ကွက်ကို တိဘက်ဘုန်းကြီး ဒလိုင်လားမား ကြွလာမယ်ဆိုလို့ ဖူးချင်လို့စောင့်ရင် တနှစ်ကျော် ဘွတ်ကင်ရတယ် ဆိုလား” ကွန်မန့်အသေးစိတ် အဲဒီမှာရှိတယ်။
ဒါက သူအကြိုက်ဆုံး ဝီကီပီးဒီယားထဲကနေ ထုတ်လာတာ။ သူက အဲဒါကို ကြိုက်တတ်တာတွေ့လို့။
အသေးစိတ်ကို ဝီကီထဲမှာ china လို့ ရိုက်ပြီး ဖတ်ပေတော့။ အဲဒီမှာ ရေးထားတာက “Mao encouraged population growth, and under his leadership the Chinese population almost doubled from around 550 million to over 900 million. However, Mao’s Great Leap Forward,alarge-scale economic and social reform project, resulted in an estimated 45 million deaths between 1958 and 1961,mostly from starvation. Between 1 and2million landlords were executed as “counterrevolutionaries”. During the Great Leap Forward between 200,000 and 1,000,000 Tibetians died, and approximately 6000 monasteries were destroyed during cultural revolution.”
တရုတ်ပြည်နဲ့ တိဘက်က မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာ မနေ့တနေ့က ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးဗျို့။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ဖြစ်တာ။ မော်စီတုန်း လက်ထက်တုန်းကလည်း သူတို့က မဟာယာနတွေပဲ။ အဲဒီတုန်းက သူပြောသလို ချမ်းသာပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းလိုက်တာများ တရုတ်ပြည်က လူ ၄၅ သန်းလောက် ငတ်ပြီး သေခဲ့တယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည် လူဦးရေထက်တောင် များသေးတယ်။ မြေပိုင်ရှင် ၂ သန်းလောက် အသတ်ခံရတယ် ဆိုတာလည်း ကျုပ်တို့ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်မြို့ လူဦးရေထက်တောင် များသေးတယ်။ တိဘက်ကလည်း နယ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို လူ ၂ သိန်းနဲ့ ၁ သန်းကြားသေတယ်ဆိုတော့ လူတောင် ကျန်သေးရဲ့လား မသိပါဘူး။ မော်စီတုန်း လက်ထက်တုန်းက တရုတ်ပြည် မွဲလိုက်တာ အာရှတိုက်ရဲ့ လူနာကြီးလို့တောင် နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ သူသေပြီး တိန့်ရှောင်ဖိန် တတ်လာလို့ မှန်ကန်တဲ့ ခေါင်းဆောင် လက်အောက် ရောက်သွားလို့ တိုင်းပြည် တိုးတတ်တာများ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်လို့ တိုးတတ်လာသလိုလို ပြောသေးတယ်။ ဘာမှကို မဆိုင်ဘူး။ အဲဒီလူ သောက်တလွဲ လုပ်တယ် ပြောတယ်ဆိုတာ အဲဒါကို ပြောတာ။ ဒါတောင် တရုတ်ကိစ္စက သိပ်ဝေးတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်သေးဘူး။ တကမ္ဘာလုံး မြင်လိုက်ရတဲ့ဟာ။ အဲဒါ တခြား သိပ်ဝေးတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းတွေ အဖြစ်တွေ သူပြောနေရင်များ သတိသာ ထားပေတော့ဗျို့။ နိပ်ချင်စိတ်နဲ့ သောက်တလွဲတွေ ပြောမှာ သေချာတယ်။ လူတွေက အဲဒါတွေကို စိတ်ပျက်တာဗျ။
ဒါတောင် ဒီလူဟာ အယ်ဒီတာမို့လို့ဗျို့။ သူက အယ်ဒီတာဆိုတော့ သူက သူများတွေ ကွန်မန့်တွေ ပို့စ်တွေကို ခလုပ်ကလေး နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အစအဆုံး ပြန်ဖတ်လို့ ရနေတာ။ ဟိုတုန်းက ကိုမိုးတိမ် ဆိုတဲ့လူနဲ့ အငြင်းအခုံ ဖြစ်တုန်းကများ အမယ် သူက ကျုပ် ကိုရင့်ကွန်မန့် ၃၀၀ ကျော်ကို တခုချင်း ပြန်ဖတ်ပြီးပြီဆိုလား။ ခြိမ်းခြောက်လိုက်သေးတယ် သူက။
သူ သူများကွန်မန့်တွေ အဲဒီလို လိုက်ဖတ်နေမဲ့အစား သူပြောတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို သူသေသေချာချာ ပြန်ဖတ်သင့်တယ်။ အမြဲတမ်း သောက်တလွဲချည်းပဲ။ ဟိုတုန်းကလည်း ကျုပ် ခဏ ခဏ အထုပ်ဖြေ ပြပြီးပြီ။ သူများတွေကသာ သူကွန်မန့်တွေကို ခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဖတ်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေး သူ့လိုရှိမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီထက် ရယ်စရာ ကောင်းတာတွေ တွေ့ရမှာ သေချာတယ်။ ပြောတဲ့လူသာ မောပါတယ်ဗျာ သူကတော့ မရှက်တတ်ပါဘူး မျက်နှာပြောင်တဲ့ နေရာတော့ နိုးတူး ဆိုတဲ့ လူပဲဗျို့။
ကိုယ် အခုလေးတင် ပြောတာတွေတောင် ရှေ့နဲ့နောက် တလွဲ ဖြစ်နေတာ အားမနာ သူက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတယ် ဆိုတဲ့ တရားတွေ အစစ်အမှန်မှ ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုပြီး ဝေဖန်ချင်သေးတယ်။ ယောမင်းကြီးကို မြင်းထိန်းငတာက ဝေဖန်သလို ဖြစ်နေတာ။ ပြောရတာ ရင်တွေ နာလိုက်တာဗျာ။
နောက် ဆိုက်ဒ်လူနည်းရတဲ့ တချက်လည်း ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကတော့ ကျနော်လိုလူတောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလို့ မသင့်ပေဘူး။ ခင်ဗျား အီးမေးလိပ်စာ သိရင်တော့ ကျုပ်ပြောပြမယ်။
ကျုပ်ဝတ္တရာပျက်ကွက်တာခွင့်လွှတ်ပါ ဗျ ။
ကျုပ်လည်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားပါမယ် ။
fb မှာလည်း ခရီးသည်ကြီး အကောင့်ရှိပါတယ်
ကျနော်အမြင်မှာတော့ ယနေ့ခေတ်စားလာတဲ့ သံဝါသ… အင်းးးးးးပွင့်လင်းလာတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်း…
ဆရာမ၀င့်ပြုံးမြင့်ပြောလို living together Nor living everywhere….
လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်လောက်မှစတင်ပြီးပိုမိုလွတ်လပ်ကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့မြင်မိပါသည်… တည်းခိုခန်းတွေကိုကျောင်သူကျောင်းသားအရွယ်လွပ်လပ်ဝင်ထွက်ခွင့်ရနေခြင်းသည်လည်း အကြောင်းအရင်းတရပ်…ကျောင်းစာသင်ခန်းမှာပင်လွတ်လပ်စွာ ချစ်ရည်လူးကြခြင်းသည်၎င်း.. ကျနော်ကျမတို့ ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီ အဖေတို့အမေတို့ဘာမှလာမပြောနဲ့တော့.. ကိုယ်တွေ့နော်…ညနှစ်နာရီကျော်မှအိမ်ပြန်လာသည့်သမီး…လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကို စောင့်ထိမ်းရမည့် စည်းဘောင်တို့ဆိုတာကိုမသိရော့သလေလား သို့မဟုတ်မသိချင်ယောင်ဆောင်ကြလေသလားဆိုတာ ကာယကံရှင်များကိုယ်တိုင်ပဲသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်..
ဆက်ပြောချင်တာက…ယနေ့အသက်လေးဆယ်ကျော်အရွယ်ရှိသူများ…ဥပမာ ခရီးသည်ကြီးတို့လည်းသိကောင်းသိမှာပါ…လွန်ခဲ့သောနှစ်အစိတ်ကျော်ကျော်မှာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပြည့်တန်ဆာခန်း၊တည်းခိုခန်းဆိုတာတွေက လက်ချိုးေ၇လို့ရသလိုရှားပါတယ်..တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အရွယ်တောင်မိဘက ည၈နာရီ၉နာရီအထိပဲအပြင်မှာနေဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်..နိုက်ကလပ်ဆိုတာဝေးလေဆွ..ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတာပေါကာစ…ပြည့်တန်ဆာများပေါခြင်းမကပေါလာတာ ဘာကြောင့်လဲလို့တွေးမိတာက ခေတ်ကြောင့်လား…
အနံထွက်သူ ၀ါ ဖုန်းနဲ့ချိတ်သူ အားလုံးကတော့ ကြက် ၀ါ ပြည့်တန်ဆာပါပဲ…ဘ၀အတွက်ရုန်းကန်နေကြသူတွေပါပဲ…
ထေရ၀ါဒအရကြည့်ရင် ကံကံ၏အကျိုးလို့မြင်တယ်…နိုင်ငံရေးမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွါးရေးကျပ်တည်းနေမူကြောင့်လို့မြင်တယ်…ကျနော့အမြင်ကိုပြောတာနော်..လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲနိုင်ပါတယ်…
နောက်တစ်ခုက သဂျီးဘက်လိုက်လို့ပြောတယ်ထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်…ဒီဆိုက်မှာထေရ၀ါဒကြောင့်လို့စွက်ဆွဲပြောဆိုရေးသာတာမတွေ့ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်…၀ါ ထေရ၀ါဒအစွန်းရောက်သူများ ၀ါ မှိုင်းမိသူများ မှိုင်းတိုက်သူများကို ရေးသားတာလို့ကျနော်ထင်တယ်…
အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဝင်မရေးတာလောက်ပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..ဒီဆိုက်ကိုစိတ်နာလောက်တဲ့အချက်တော့မရှိလောက်ပါဘူး..ကျနော်ဆိုရင်လည်းဝင်ဖတ်ပြီးမရေးတာများပါတယ်..ဗာမာပြည်ရဲ့ ကိုးနတ်ရှင်ကြောင့်လည်းပါတာပေါ့…လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကျော်က ဒီဆိုက်ကို ဘာကြောင့်မပိတ်ခံရတာလည်းလို့တောင်လူတွေက သံသယဖြစ်ဖူးတယ်..ဟက်ကာတွေရန်ကြောင့်တောင်းပန်ပြီး ရပ်တည်ထားရတာ.. ယနေ့ဒီအခြေအနေထိရောက်အောင်ရပ်တည်နိုင်လာတာ အစုကြီးအလှူကစလို့ လစဉ်မပြတ်လှူတန်းနေတဲ့ ဒါဇင်ပလပ်၊တွေ့စုံပွဲတွေနဲ့ဆုတွေပေးနိုင်တဲ့ မန်းဂဇက် ဒီလိုဆိုက်မျိုးအဘယ်မှာရှိပါစ…လူကြီးလူငယ်စုံလင်စွာနဲ့ အပြန်အလှန် ဗဟုသုတမျှဝေရာ က ဒီဂေဇက်ဆိုတဲ့နေရာပါ…
အတွေးအခေါ်အယူအဆများအားကောင်းစေရန် ဗဟုသုတများပြန်ပွားစေရန် မြန်မာလူမျိုများ မအ ကြစေရန် သူကြီးရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားစွာနဲ့ ဤမန်းဂေဇက်ကို ဇနက်ပုတ်လေးမှစလို့ မြို့ကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနေသည်လို့မြင်မိပါသည်…
အဲနေ့ကအဲလောက်ဆိုးမှန်းခုမှသိတယ် ခရီးသည်ကြီးရေ။ ဒီအပိုင်းကတော့ ဗရာဗိုပါ။
သဂျီးအပိုင်းကတော့ ထေရ၀ါရကို ကန့်ကွက်တဲ့အရေးအသားမမြင်မိပါဘူး။ ( သဂျီးဖက်ကလိုက်ပြောတာမ ဟုတ်ပါ )။ ဒါပေမဲ့ အစွန်းရောက်တွေကို ဆန့်ကျင်တာလို့မြင်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံထဲတင်မှာတောင် မဟုတ် ကျွန်မတို့ ရုံးထဲမှာတင် အစွန်းရောက်နဲ့ အစွန်းရောက်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတာပဲ။ ဒါကိုအပြစ်လို့မထင်သင့်ပါဘူး။ အစွန်းရောက်တွေကလဲ သူ့ခံစားချက်နဲ့သူ အစွန်းရောက်ပြောဆိုရေးသား ခွင့်ရှိသလို အစွန်းရောက်တွေကို မကြိုက်တဲ့ ဆန့်ကျင့်တဲ့သူတွေလဲ သူ့အခွင့်အရေးနဲ့သူရေးသားပြော ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီဆိုက်ကြီးမှာ ငြင်းခုန်ရင်းနာမည်ကြီးလာတာပါ။ အခုလဲဝင်ရောက်ငြင်းခုန်လို့ရပါတယ်။ လူနည်းစုလူများစု ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမထားပဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုငြင်းခုန်လို့ရပါတယ်။ အခုဟာက ဖုန်းနဲ့က ၀င်လို့အဆင်မပြေတာရယ် ကွန်မင့်ပေးလို့ခက်တာရယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့တောင်ပွင့်ချင်မှပွင့်တာရယ် ကြောင့်လူဝင်နည်းတယ်ထင်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်တွေကို မရောက်ပါနဲ့တားလို့မရသလို ဆန့်ကျင်သူတွေကိုလဲ မဆန့်ကျင်ပါနဲ့တားလို့မှမရတာ။ ခရီးသည်ကြီးနဲနဲလွဲနေတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်
တစ် နှစ် မှာ ဒီ တစ်လ တစ် လ မှာ တစ်ရက် ထဲ မို့ လို့ သာ တော် ပေ တော့ တယ်။
တစ် လ တစ် ခါ သာ ဘာ လင် တိုင်း ကြ ရင် တော့
ကား ဆ ရာထော
တည်း ခို ခန်း ထော
u san Hla Gyi ခင်ဗျားးး
ကျတော်လည်း e.mail ပေးချင်လိုက်တာဗျာ။
(ဝါသနာ ကိုက :mrgreen:)
လစ်ဗင်းတူဂဲသား ကို ခေတ်ကာလအရ ခါတော်မှီမယ်ဆိုရင်
ကျုပ်တို့လို လူအို အထီးတွေကလည်း မယားပြိုင် သုံးနှစ်အဆင်ပြေမပြေစမ်းထားဖို့တောင်းဆိုရ မလိုလို
လူအို အမ တွေလည်း လင်ပြိုင် သုံးနှစ်အဆင်ပြေမပြေ
ပုံ / သားနှစ်ယောက်အဖေ
ကျွန်မတို့အတွက်ကတော့ အပျိုဘ၀ထဲက အချစ်နဲ့လိင်ကိစ္စကိုခွဲမြင်ပါတယ်။
ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ဆိုတာကို အချစ်ကိစ္စအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ဘယ်လိုတွေသတ်မှတ်ပစ်ကုန်တယ်ဆိုတာ လိုက်လို့တောင်မမီတော့ပါဘူး။
ကိုယ်တွေခေတ်ကတည်းက တစ်ချို့က တစ်မျိုးသတ်မှတ်ခဲ့လေသလားတောင်မသိခဲ့ပါဘူး။
နောက်ပြီးရွာနဲ့ပတ်သတ်လို့…အနီတွေ၊အစိမ်းတွေပေးတာကို ဘယ်သူကမခံစားရဘူးဆိုဆို ကျွန်မတို့တော့ခံစားရတယ်။
နောက် လက်ရှိမန်ဘာတွေအပေါ်မှာ လျစ်လျူမရှုသင့်လို့မြင်ပါတယ်။